Ndị folks na-echefu nọmba ekwentị, akara ngosi, aha na URL… mana ha anaghị echefu ihu n'ihu. Ọ bụ ya mere anyị ji akwado ka ndị ahịa anyị niile nweta ihu ha n’ebe ahụ! More na ndị ọzọ, anyị na-elekọta mmadụ ọnụnọ, anyị blog posts na ọbụna anyị search results na-amalite na-egosi ihu. Ihu enyi dị mma bụ ọnụ ụzọ na-akasi obi iji nweta atụmanya n'ihu gị ma ha agaghị eleda anya.
Chọta onye ọkaibe mara mma - Ahapụla ihe onyonyo gị na igwefoto iPhone ma ọ bụ laptọọpụ gị… onye na-ese foto ga-edobe ọkụ ahụ ma nye gị onyoyo omimi nke dakọtara na njirimara gị. Anyị hụrụ n'anya Paul D'Andrea's ọrụ! Tụkwasị obi na mkpebi ha na ọnọdụ na mpaghara ahụ!
Banye maka Gravatar akaụntụ - bulite ihe oyiyi gị, gbakwunye ma gosipụta adreesị email gị niile. A na-eji Gravatar jiri ọtụtụ usoro ikwu okwu na mgbakwunye WordPress (onye nwere ebe ikpo okwu) yana a na-asọpụrụ ya. Ugbu a ihu gị ga-egosipụta mgbe niile ma ị nọ na nkwupụta ma ọ bụ na profaịlụ WordPress.
Gbalịa idobe ihe oyiyi gị na-agbanwe agbanwe na profaịlụ netwọk mmekọrịta gị. Mgbe mmadụ malitere ịhụ ihu gị na azịza blog, mgbe ahụ na Facebook, na Twitter, ha nwere ike bụrụ ndị na-akwado ofufe, ndị na-eso ụzọ ma ọ bụ ndị ahịa! M na n'ụzọ nkịtị ka ndị mmadụ na-eje ije ruo m si Paris ka San Francisco bụ ndị ghọtara m site m foto… ọ na-akwụ ụgwọ na dividends!